Dowladda Soomaaliya Iyo Maamulka Hirshabeelle oo baaq kasoo saaray dagaalada Kabxanleey iyo Deefoow - Somali Link Newspaper
Talaado, September, 7, 2021 (HOL) – Raysal wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay dagaalka ka socda deegaanka Kabxanleey ayaa ku baaqay in si deg deg ah u joojiyaan beelaha walaalaha ah ee deegaankaasi ku dagaalamaya.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaallamaya deegaannada Deefow iyo Kabxanley ee gobolka Hiiraan. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku boorriyay madaxda dowlad-goboleedka Hirshabeelle, nabad doonnada iyo waxgaradka gobolka in ay kaalin ka qaataan joojinta iyo xal u helista colaaddaas” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska Rooble.
“Madaxweyne Guudlaawe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilligan uu daato dhiig dad walaalo ah waxa uuna dhinacyada dirirta u dhaxeyso ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka ku joojiyaan, islamarkaana wax walba ku xaliyaan wadahadal. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Maamulka Gobolka, Hay’addaha Amniga, Nabadoonada, Waxgaradka iyo Culuma’udiinta Gobolka Hiiraan in si deg deg ah ay ugu baxaan joojinta colaada beelaha walaalaha ah” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada Hirshabeelle.
Previous articleVideo game CEO steps down after Texas abortion law backlash
Next articleTurkey and UAE rein in dispute that fueled conflict and hurt economy